Khariidadaha TomTom ee bilaashka ah - Ma ogtahay sida loo cusbooneysiiyo TomTom-kaaga? | War gadget
Khariidadaha TomTom ee bilaashka ah
Waxaad rabtaa cusbooneysii TomTom? Maanta waxaan haysannaa habab badan oo aan ku tagno meeshii aan u soconnay. Waxa aad uga dambeeya khariidadaha waaweyn ee waraaqaha ah ee aan soo bandhigi karno, laakiin xoogaa way ka adkaatay in lala tashado oo dib loogu celiyo qolka gashi-galka. Hadda kulligeen waxaan ku haysannaa khariidado badan jeebkeena, taleefannadeenna casriga ah. Si kastaba ha noqotee, badmaaxayaasha GPS desktop-ka waxay leeyihiin anteenooyin ka waaweyn oo had iyo jeer way ka saxnaan doonaan moobiilladayada, hageyaasha ugu caansanna waligood waxay ahaayeen mudnaanta TomTom.
ka Khariidadaha TomTom waxay na siinayaan macluumaad badan Oo sidaasay ahayd muddo dheer. Macluumaadka wuxuu noqdaa mid duugoobay sida ugu dhakhsaha badan ee jidadku isu beddelaan, sidaa darteed lix bilood oo keliya, iyadoo ku xidhan aagga aan ku nool nahay, waxaan haysan karnaa GPS nagu hagta meelaha aan hadda ka jirin. Waxa fiican waa taas u cusbooneysii TomTom bilaash ah macluumaadkani waa nidaam toosan oo toosan. Waxyaabaha xun ayaa ah inaan bixin doono wax badan si aan u cusbooneysiino qalabkeena. Haddii, sabab kasta ha noqotee, aynaan u dulqaadan karin kharashka, waxaan had iyo jeer ula soo degsan karnaa khariidadaha qaab kale.
1 Download Khariidadaha TomTom Free
2 Ku rakib Khariidadaha TomTom
3 Ku hawl geli Khariidadaha TomTom adigoo adeegsanaya fantastivate
4 Sida loo rakibo Radars-ka TomTom
4.1 Shaxda iswaafajinta Khariidada 955/956
4.2 Miiska iswaafajinta 960
Download Khariidadaha TomTom Free
Habka ugu fiican ee loo ilaaliyo desktop-ka TomTom had iyo jeer habeyn waa booqo madasha Forokeys.com. Forokeys waxaan kaheleynaa dhamaan macluumaadka lagama maarmaanka ah si TomTom-keena uu noo siiyo macluumaadka saxda ah oo uusan aheyn sida saaxiibkey sheego, in halkii TomTom uu ahaa «doqon» fudud. Laakiin Forokeys ma jiraan oo keliya khariidado loogu talagalay TomTom, laakiin sidoo kale waxaa jira dhiirrigelin kale oo ka dhigi doonta badmareenkeenna a qalabka wadada.
Dhiirrigelinta aan tilmaamayo ayaa ah qodobbada xiisaha leh, oo si fiican loogu yaqaan 'POI (Point of interest) ama POI. Qodobada xiisaha leh waxaan sidoo kale leenahay radaar go'an, radaarrada qaar ee ay tahay in sharcigu daabaco, laakiin marwalba way kafiican tahay in lagu daro hageena GPS intii aan la tashan lahaa macluumaadka DGT (Agaasinka Guud ee Taraafikada) markasta oo aan safar u aadno aag. taasi ma naqaano.
Si loo awoodo isticmaalka khariidadaha TomTom, waxa ugu horreeya ee aan sameyno waa raadinta kuwa na xiiseynaya. Si tan loo sameeyo, ka dib diiwaangelinta, waxaan ku sameyn karnaa raadinta golaha. Haddii aad rabto khariidadaha Isbaanishka, maxaad xiisaynaysaa inaad ka raadiso "Iberia" ama "Europe". Marka khariidada la soo dejiyo, waa inay shaqeysaa, taas oo ah inaad sidoo kale soo dejiso firfircoon taas ayaa laga heli karaa golaha.
TomTom wuxuu bixiyaa khariidado lacag la'aan ah inta uu nool yahay oo bilaash ah
Ku soo degsashada khariidadda ForoKeys kama duwana sida aan ugu samaynno degello badan degellada faylasha noocan ah (aan rasmi ahayn). Golaha dhexdiisa waxaan ka heli doonnaa qoraal ay ku qoran yihiin xiriiriyeyaasha khariidadaha TomTom oo aan raadineyno, xiriiriyeyaashani waxay noo geynayaan goobta soo dejinta khariidada mid ka mid ah aagagga si aan u soo dejino faylalka ugu caansan (sida Mega, laakiin midkani wuxuu u muuqdaa mid loo heli karo oo keliya dadka isticmaala VIP forum) Markaad soo dejiso waa inaan rakibnaa.
Ku rakib Khariidadaha TomTom
Ku rakib khariidad GPS Tomtom ah Desktop-ka maahan wax isku murugsan dhammaantiis (qalalaasaha ayaa gadaal ka yimaada). Si loo rakibo, waxaan sameyn doonaa waxyaabaha soo socda:
Waxaan ku xireynaa fiilada USB-ga GPS-ka iyo kumbuyuutarka (Windows haddii ay suurta gal tahay).
Waxaan soo helnay feylkii aan soo dejinnay oo aan ka siibnay (haddii la isku riixay).
In "My PC" waxaan ku arki doonnaa TomTom-geena wadis la saari karo. Waanu fureynaa.
Waxaan si sax ah u riixnaa oo aan abuureynaa fayl.
Waxaan magaca ugu bedelnay galka isla magaca faylkii aan soo degsanay. Aad ayey muhiim u tahay inuu leeyahay magac isku mid ah ama uusan shaqeyn doonin. Haddii aan soo degsanay "east_europe.zip", galkayagu waa in loogu yeeraa "east_europe" (iyada oo aan la soo xiganayn labada xaaladoodba).
Waxaan nuqul ka soo qaadnaa xogta feylka aan la furin ee galka cusub oo horey ayaan u sii rakibeynay, laakiin wali waa inaan kicinaa.
Ku hawl geli Khariidadaha TomTom adigoo adeegsanaya fantastivate
Waxaa jira siyaabo kale, laakiin waxaan u maleynayaa in kani yahay kan ugu fudud uguna dhaqsaha badan. Waxaad ka soo dejisan kartaa "fantactivate" ForoKeys; waa sidii boosteejo go'an. Si loo kiciyo khariidadaha waxaan sameyn doonaa waxyaabaha soo socda:
Waxaan ku xireynaa GPS-keena 'TomTom GPS' Windows-ka PC-ga.
Kumbuyuutarkeena kumbuyuutarka waxaan ka heleynaa darawalka laga saari karo Tomtom-keena.
Waxaan u nuqulnaa feylka FastActivate.exe xididka xusuusta gudaha ee GPS-ka. Haddii aan haysanno kaar, si ka fiican SD kaarka ah.
Waxaan socodsiinaa FastActivate.exe
Waxaan gujinnaa lambarka meeniska aan u baahanahay. Waxaa lagaa rabaa inaad riixdid lambarka 4.
Sida loo rakibo Radars-ka TomTom
Waxaan sidoo kale ku rakibi karnaa POI-yada (Qodobbada Xiisaha) dusha desktop-ka TomTom. Ogaanshaha sida loo rakibay khariidadaha TomTom, rakibi raadaro si ay nooga digaan oo aysan u qaadin sawirka waa ciyaar caruureed. Kaliya waa inaan ku jiidanaa feylasha aan soo dejinay, kuwaas oo badanaa leh magacyo sida "radars_fijos.ov2" (iyo inta kale oo leh siyaado kala duwan), galka khariidada la doonayo.
Waxaa muhiim ah in la xuso taas, si macquul ah, haddii aan ka soo dejino meelaha xiisaha leh ama raadaarka Spain, waa inaan ku guurino galka "Iberia" ama khariidad ay ku jiraan Spain, sida Yurub. Raadiyaasha Isbaanishku kuma shaqeyn doonaan khariidada Aasiya, mar alla markii aan ka baxno waddanka aan rakibnay raadaarada, waan joojin doonnaa helitaanka digniinta. Si kastaba xaalku ha ahaadee, in kasta oo aan ku arkay raadaro Spain ku yaal khariidadaha Yurub, tan ugu habboon ayaa ah u isticmaal dhibcaha xiisaha kaliya khariidadaha loo abuuray. Way kafiican tahay in laga hortago intaad daaweyn
Shaxda iswaafajinta Khariidada 955/956
Miiska iswaafajinta 960
Haddii aad haysatid hage desktop TomTom ah, mar dambe cudurdaar ma haysid si had iyo jeer kuu sheegto sida ay tahay inay ahaato, shay markasta muhiim ah oo aad iyo aad u badan hadaan wadada ku soconno. Waxa kale oo mudan in la rakibo raadiyeyaasha qariiradaha aad isticmaasho, kuwaas oo kaa caawin doona, wax walba, si aan booliisku kuugu ciqaabin, wax had iyo jeer ku habboon waxna ku sii kordhiya hadda, in ay jirto dhibaato weyn oo aan cidina jirin Way fiicantahay in la bixiyo wax ka badan inta loo baahan yahay.
Si kastaba ha noqotee, "Digtoonow, darawalka darawalka, waddadu waa khatar." Ma kuu cadahay sida cusbooneysii TomTom-kaaga bilaash?
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » GPS » Khariidadaha TomTom ee bilaashka ah
163 faallooyin, ka tag taada
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado GPS-ka uu ka kooban yahay khariidadda Jamhuuriyadda Argentina iyo magaalooyinkeeda ugu muhiimsan
Jawaab Osvaldo Juan Maccio
Su'aalaha ku saabsan tomtom, iyo daalacashada kale, waxaan kugula talinayaa javiermb's forum: http://foro.javiermb.com
khariidaduhuna ma ahan bilaash, waa iskudhafyada hore.
Saaxiibbadiis iska ilaali cusboonaysiinta navman ee dvd 2008
inay kaa iibinayaan CRAMBO maxaa yeelay ma soo sheegaan in raadinta dhibcaha xiisaha ay baaba'ayso, oo si kasta oo aad u sheegato, gacmahooda way nadiifiyaan inta ugu badan ee ay sameeyaanna waa kuu soo diraan…. (maya maya maya) waxay kuu dirayaan LONDON navman si aad dhibaatada u xalliso.
LAAKIIN SALO OO KELIYA OO AAD SIiso iyaga LACAGO WAAD HAYSATAA DVD si aad uga nixiso xamaamyada
Waxaan rajeynayaa inaad taxaddar leedahay
Waxaan daaraa tomtom-ka waxayna ii sheegtaa wax qariirad ah, sidee u soo degsataa khariidad kasta si ay u shaqeyso
Ku jawaab kiniin
Sideen ku heli karaa khariidada venezuela ee GPS-kayga gacanta ee TOM TOM ???
Waad salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaad ii sheegto sida loo helo khariidada loo yaqaan 'tomtom one v2' oo ka socota Spain iyo Boortaqiiska, ka dib waan tirtiray kumana samayn nuqul nuqul ah, waad ku mahadsan tahay inaad i caawiso
Waad salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaad ii sheegto sida loo helo khariidada loo yaqaan 'tomtom one v2', oo ka socota Spain iyo Boortaqiiska, waan tirtiray mana aanan sameynin nuqul nuqul ah, waad ku mahadsan tahay caawimaad
waa maxay noocii ugu dambeeyay ee TOM TOM
Ku jawaab isra
QODOBADII UGU DANBEEYAY EE Khariidadaha Qarxa
Sideen u raadiyaa khariidadaha Mexico gps invion 3v4 ma ii sheegi kartaa halka aan ka helo
hello, ma fiicnaan laheyd inaad ii sheegto sida loo cusbooneysiiyo midkeyga tomtom, mahadsanid.
aad ugu wanaagsan dhamaan, waxaan kashifay; Waxaan hayaa tom tom 720 go,
oo leh khariidad v705 waxaanan jeclaan lahaa inaan dhigo nooca v8. yaa leh aalado radar badan iyo xeelado kale, qof ma ii sheegi karaa halka laga helo, mahadsanid dhamaantiin kahor.
Ku jawaab jaamtinez
Salaan kadib, xagee iyo sideen kuhelaa khariidadaha Venezuela my tomtom one¡¡¡¡
Waad salaaman tahay, waxaan haystaa Ed3 tomtom mana haysto khariidadaha Venezuela, yaa iga caawin kara… ..?
Haye, waxaan ku noolahay Venezuela waxaanan u baahanahay inaan helo khariidad dalkan ah oo loo yaqaan 'tomtom one' mana garanayo sida loo soo dejiyo, mahadsanid.
Jawaab oscar santana
qofkasta wuu garanayaa sida loo cusbooneysiiyo tomtom one maps.thanks
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii ay jiraan khariidado venezuela loogu talagalay GPS tom tom one.
Ku jawaab gustavo de lemos
Bogga ku xiran iskuxiraha kore wuxuu kaliya muujinayaa xulashooyinka tomtom 5 iyo 6, halkaasoo aan ka helo tomtomkeyga hal nooc 3
Waxaan raadinayaa mid ka imanaya Mexico haddii qof ogyahay waan jeclaan lahaa jawaabtaada
GOOBTA KOOWAAD dijo
In kasta oo ay horeba u weydiiyeen, haddana ma arko cid u jawaabtay. Qof ma fahmi karaa sida loo cusbooneysiiyo ama loo soo dejiyo khariidadaha Spain-Andorra-Portugal, ee loogu talagalay TomTom ONE. Aad baad ugu mahadsantahay horay
Jawaab TOMTOM ONE
Saaxiib waxaan iibsaday tomtom mid 125 mana heli karo khariidada Venezuela, haddii aad iga caawin karto sida aan u sameeyo ama halka aan ka helo, mahadsanid
Ku jawaab Luis alfredo
hello waxaan hayaa tom tom one kiero oo cusboonaysiiyay sidaas vien ace 7 sano wax fikrad ah kama haysto sida ay tahay ace kiero spain portugal iyo andora
Salaan kadib waxaan arkay qof walba oo wax weeydiiya yaa wax weeydiiya oo cidna waxba ma oga? Waxaan ubaahanahay khariidada venezuela fadlan hadaad wax ka ogtahay harada ila soo socodsii gps-kaygu waa tom tom cadadkiisa 3-aad gps aad ayuu u fiican yahay laakiin gringos-ka wuxuu noqon doonaa maxaa yeelay waxaan ku cusbaa sanduuqiisa maxaa yeelay ima aysan caawinin laakiin wax aan jirin. helpaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ku jawaab Neville
Waxaan raadinayaa khariidada spain ee tomtom 74500, qof ayaa garanaya halka laga helo
sideen ku heli karaa khariidadaha venezuela ee loo yaqaan 'my tomtom URGENT'
Ku jawaab Tere
Ma i caawin kartaa, waxaan u baahanahay khariidada Isbaanishka ee loo yaqaan 'tomtom go 300 navigator', mahadsan 24/02/2009
iibinta ernesto dijo
Waxaan ku noolahay Venezuela mana aqaano sida loo soo dejiyo khariidada, mahadnaqa GPS-kayga tomtom
Ku jawaab iibinta ernesto
Waxaan ku noolahay usa, laakiin waxaan u socdaa Mexico waxaanan rabaa inaan ogaado sida loo soo dejisto khariidada gps tom tom 730, haddii qof garanayo sida loo sameeyo, waxaan jeclaan lahaa inay ii sheegaan
Ku jawaab Eleazar jaime
Dhammaantiin waad salaaman tihiin, qofna ma garanayaa sida aan ikhtiyaarka u dhigo
HAGAHA LAYSKA HELAY, ee khariidada tomtom 720
loogu talagalay TOMTOM ONE, ka soo dejiso emule ama maro, wuxuu kuu sharxi doonaa sida loo rakibo, nasiib wacan
si aan u soo dejisto khariidada spain waxay i weydiinaysaa eray sir ah faylka qeexaya ee spain / cline.dat waa maxay furaha?
Rubben Nachar dijo
nidaamka gps ee blackberry
Jawaab ku ruben nachar
Ma jiraa qof garanaya lambarrada loo yaqaan 'iberia plus'
Haddii aad taqaanid qof koodhkaas ah ayaa ii soo diri kara taleefankayga gacanta fadlan 664111639
WAA SALAAN WAA TOM TOM ONE XL WAAN RABAA IN AAN OGAADO SIDA LOO HELO Khariidada VENEZUELA QALABKAAN. Mahadsanidiin Hordhaca. !!!!
Waxaan ku noolahay Isbaanish kumana soo dejisto khariidada Yurub gpskayga (tomtom), qof ma ii sheegi karaa?
Kaliya waxaan soo iibsaday 2 tom toms ee usa, qaabka one xl.
Waxaan rabaa inaan ku isticmaalo Argentina, waad awoodaa ama waan ku lumin karaa c… .., mahadsanid
hello !!! Sideen ku heli karaa softiweerka bilaashka ah iyo khariidada Jasiiradda Iberia ee omtom hal daabacaadda 2aad?
Ku jawaab irene
halkan wax badan oo la weydiinayo laakiin cidina waxba ma xalliso! Muxuu yahay kulan muhiim ah
Ku jawaab buaggggg
waa hagaag maxaa dhacaya oo ay ka jawaabi waayaan su'aalaha ku saabsan khariidadaha venezuela ee loo yaqaan 'tomtom' fadlan ha naga yeelin kuwa runta ah iyo waqtiga dhabta ah.
Ku jawaab marcos catillo
Waad salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii qof ogyahay sida loo helo khariidadaha bilaashka ah ee Isbayn ee loogu talagalay dahabka dheeman htc. mahadsanid salaan
Sideen u cusbooneysiin karaa khariidadaha loogu talagalay Tomtom ONE ee Galbeedka Yurub
Jawaab u baahan
caajis ah dijo
Waad salaaman tahay Flores, dhibaato mala xaliyay? haddii kale, ila soo xiriir, tixgelin
Ugu jawaab stard
halkee baan ka heli karaa khariidadaha Mexico
xfas ii soo sheeg
mailkeygu waa kaneecada_rata@hotmail.com
SIDEE AYAAN U SAMEEYSAN KARAA QODOBADII UGU DANBEEYAY EE Khariidadaha TII HAL XL.
Tomtom Khariidadaha Venezuela dijo
Waad salaaman tihiin subax wanaagsan, xagee ka helaa khariidadaha loogu talagalay Venezuela loogu talagalay tumtum-gayga daabacaadda 3-aad
Ku jawaab Khariidadaha Tomtom Venezuela
Waad salaaman tahay, habeen wanaagsan, waxaan doonayay inaan ogaado waxoogaa xiriiriye ah oo aan kala soo baxo khariidada Yurub ee loo yaqaan 'tomtom one'
badiyaa waa la faquuqa, wax kasta oo lagu galayo bogagga pornos, HA DHIGAN XAALADO AYAAN AH Khariidado dhab ah
Ku jawaab yoana
badiyaa waa la faquuqaa, wax kasta oo lagu galayo bogagga pornos, HA DHIGAN XAALADO AYAAN AH Khariidado dhab ah, Iyagu waa xiriiriyeyaal been ah
Jilipollas, wax kasta oo lagu galayo bogagga pornos, HA KU QAADAN KIISO MA AHAAN Khariidado dhab ah, Iyagu waa xiriiriyeyaal been ah
Waad salaaman tahay, waxaan hayaa TomTom One XL, Fadlan, barnaamijka khariidada khariidada waa la tirtiray waxaanan jeclaan lahaa qof inuu emailkan iigu soo diro barnaamijkan.
Javier shrew dijo
Kuwa weydiiya khariidadaha Venezuela ee loo yaqaan 'tomtom' waxaan kuu sheegayaa hal shay. Waxay u leeyihiin wax aad u fudud, iyagoo weydiinaya saaxiibkood Chávez arrintuna waa la xalliyey.
Jawaab Javier Shrew
Waad salaaman tahay, waxaan iibsaday TOM TOM ONE GPS waxaanan jeclaan lahaa inaan ogaado meesha aan kala soo bixi karo khariidadaha Mexico maadaama ay qaali yihiin iib ahaan
Waad ku mahadsantahay dareenka
Jawab David Benitez
xagee ka heli karaa khariidadaha poloni i ukrania ?????????????????
iyo? cd ma haysan karnaa khariidadaha Argentina
Waad salaaman tahay waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado meesha aan ka helo khariidad casri ah oo loogu talagalay gps tomtom oo ay ku jiraan xaalada radaarka booliska taraafikada ee Spain oo aan sidaas loo dhaafin… Mahadsanid
Fadlan, sideen ku heli karaa khariidada venezuela ee TOMTOM One gps ???
Jawaab Gustavo A.
Xagee ka heli karaa khariidadaha cusub ee Yurub ee SONY NV-U93T.
Hagaag, sony ma dhahayo maya.
Ku jawaab eacster
Runtu waxay tahay in gps tom tom uu yahay bulshit, ma jirto wado lagu rakibo khariidada Argentina ilaa poronga taasna waxaa kor ku xusan in kulamadu ay u muuqan doonaan kuwa ugu fiican, qof walba wuu iska xishoodaa iyo kii ii keenay gps sidoo kale
halkaas oo aan ku cusbooneysiin karo tomtom one xl bilaash ah khadka tooska ah.
koonfurta america waxaa jira khariidado kaliya oo loo yaqaan 'tomtom maps' oo loogu talagalay brazil iyo argentina
waqooyiga america mexico xasilloon midow iyo canada
Yurub oo dhan
Ku jawaab azasel
SALAAN. Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii ay jirto iyo sida loo soo dajiyo khariidada wadnaha ee brazil
Waad salaaman tahay, waxaan hayaa mootada qtek s200 waxaanan hayaa tomtom laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan awood u yeesho inaan ku cusbooneysiiyo BILAASH, qof ayaa garanaya sida aan u sameyn karo waad mahadsantahay hadaad i caawisona waan kuugu mahadcelinayaa qalbigayga oo dhan, salaan iyo saaxiib
QOF WUXUU GARAN YAHAY HALKAN KA HELI KARO Khariidadaha MEXICO BILAASH AH EE GURIGAYGA HAL 125 SE
HORTA AAN KU MAHADSANAHAY CAAWIMADA, MAHADSANIDIIN!
AAN ARAGNO… DADKA KASTA OO KALE ISKU MID AH MA .MAP OO LOOGU TALAGALAY GOBOLKA VENEZUELA B .LAGA SIDA AAN UGU AKHRIYO FAALLO, WAXAY U Muuqataa IN AY DHAMMAAN YIHIIN PARDILLOS OO KU SAABSAN DIYAARADDA HALKAN… SU'AALO KELIYA OO AAN JAWAABO LAHAYN .. ..
Waa salaaman tahay, waxaan si deg deg ah ugu baahanahay inaan kala soo baxo khariidada Venezuela gt-gayga tomtom, fadlan sug jawaab deg deg ah deg deg, mahadsanid.
Waxaan jeclahay in la ii wargaliyo oo aan arko muuqaalka guud ee dalalka oo dhan
qofkii raba waxaan haystaa nuqulka asalka ah ee tomtom midka ka shaqeeya go and xl qofkii ubaahan inuu ila soo xiriiro waxaan ka imid barcelona gasper210688@hotmail.com
fadlan si deg deg ah iigu soo dir
Waa salaaman tihiin dhammaantiin, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado nooca loo yaqaan TomTom ee si fiican iigu habboon taleefankayga casriga ah ee loo yaqaan 'BlackBerry curve 8520' iyo haddii uusan jirin, nooc kasta oo ka mid ah Garmi, Sgic ama mid kale….
Waad salaaman tihiin, fiid wanaagsan, maanta waxaan iibsaday keydka GPS TOMTOM XL 30 taxane ah oo markaan furayo ii sheegaya inaysan jirin wax qariirad ah shaashadda, waxaan wacay adeegga farsamada waxayna ii sheegeen inay tahay inaan iibsado khariidad cusub iberia v8.40 oo u qalma koollada, waxaa jira hab lagu helo oo bilaash ah ama ay jirto qaab kale oo lagu saxo.
Xagee ka heli karaa khariidadaha yurub ee SONY 93T, ma waxaa suuro gal ah in la dhigo kuwa TOM TOM? Ma jiraa qof horey u heley TOM TOM oo lagu rakibey SONY 93T?
saaxiib waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida loo sameeyo si loo rakibo khariidada Panama ilaa gps my tom-tom! Mahadsanid!!
Ujawaab leider medina
Waad salaaman tihiin, waxaan iibsaday tomtom go 730 bil ka hor oo xitaa iima sheegeyso kalabar radaarka, waxaan u maleynayaa in markaad wax cusub iibsaneyso, khariidadaha iyo raadaarraduba waa in la cusbooneysiiyaa Sideen ula soo bixi karaa ama u cusbooneysiin karaa waxan oo dhan, aad baad u mahadsan tahay.
Waad salaaman tahay, qof ma sheegi karaa halka laga helo khariidadaha Spain iyo Boortaqiiska ee loo yaqaan 'tomtom one v8' maxaa yeelay kuwa aan geliyay dalka iberia ayaa i siinaya qalad, waxay leedahay qalabku sax maahan oo kiiskeyga waxaan ku qasbay inaan qaabeeyo gps sababtoo ah waxay siisay qalad mahadsanid aad u kooban.
subax wanaagsan fadlan waxaan ubaahanahay qariirada venezuela ee tom tom one
Anigu waxaan la mid ahay kuwa kale oo badan raadinta khariidadaha venezuela ee loo yaqaan 'tomtom gps' ...
Waxaa jira softiweer u muuqda inuu xallin karo dhibaatada adoo u rogaya khariidadaha Garmin qaabkii uu u adeegsaday Tomtom gps, waxaa loogu yeeraa gpsbabel ... laakiin kumaan dhex galin ...
Haddii qof guuleysto ... La wadaag macluumaadka ..
Waa salaaman tahay, qof ma ii sheegi karaa halka aan ka soo dejisan karo khariidadda Talyaaniga iyo Isbaanishka, oo bilaash ah tan TomTom.
Sideen ugu soo dejisan karaa sawir gacmeedka Isbaanishka iyo Boortaqiiska radarrada anigoon dina bixin.
Ku jawaab marito30
si fiican gps waa tan tan v4
Yuusuf Granados dijo
Waxaan hayaa Pda Airis waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida loo rakibo tom tomka la cusbooneysiiyay
Jawaab Jose Granados Parejo
LAAKIIN IYO JUAN dijo
AABEL IYO TILMAAMO WAAD KUGU JECLAAN YIHIIN, QAALIYA INTA AAN LA AAMININ INTAANA INTA BADAN AYAI
Kujawaab LAAKI IYO JOHN
Waad salaaman tahay, halkee ka heli karaa khariidadaha magaalooyinka sida Otamendi, Miramar, iwm?
Waa salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado meesha aan ka soo dejisan karo ama ka iibsan karo khariidada sawir gacmeedka loogu talagalay TomTom GPS….
Jawaab Luis Macher
Waad salaaman tahay, waxaan haystaa taxanaha 'tomtom v4' taxane ah 30/125/130 waxaanan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii qof uu cusbooneysiiyay khariidadaha ama uu garanayo halka aan ka soo dejisan karo bilaash, waan ku qanacsanahay tani waa emailkeyga javier.pm74@hotmail.com.
Waad ku mahadsan tahay Pablo, waxay kaloo xaliyeen dhibaatada khariidadaha Argentina waxaan joojiyay inay ahayd 2 sano gps-gayga iyo ugu dambayntii dadka http://www.mapeo-gps.com.ar salu2
Waxaan hayaa mid tomtom ah mana aqaan sida loo raadiyo khariidadaha cusub ee Spain ee ku yaal tomtomkeyga haddii qof ogaado oo uu galo msn ke bidixda.
noelia blanco guursatay dijo
Waad salaaman tihiin waxaan ku bilaabayaa tomtom waxaanan jecelahay inaan helo khariidada wadada ee talyaaniga. Ma jiraa qof og meesha aan ka heli karo ?? Mahadsanid.
Ku jawaab noelia blanco guursaday
Rafael Melendez oo ka socda Guaynabo Puerto Rico dijo
Waxaan soo iibsaday GPS-ka MAGALLAN waxaanan ubaahanahay inaan cusboonaysiiyo mana heli karo
Sida loo sameeyo ,,, markay bilaash iigu soo bandhigaan waxaan isku dayaa inaan soo dejiyo ka dibna
Lacag baa la i siiyaa waxaanan la yaabanahay macnaha erayga bilaash ahi, qof ayaa ii sharixi kara MA FAHMO
Jawaab ku sii Rafael Melendez oo ka yimid Guaynabo Puerto Rico
GUULEED MENDEZ dijo
Waxaan haystaa tomtom go 730, waxaan jeclaan lahaa khariidada Mexico si aan u arko haddii aad i siin karto
Jawaab ku guuleysta MENDEZ
Waxa aan raadinayo waa NavCore 9.001 oo ay ii sheegeen in lagu rakibi karo GO 720 ...
Bogga rasmiga ah ee TomTom bogga ugu dambeeya ee la jaan qaada wuxuu ku qoran yahay 8.351
Ku jawaab z666zz666z
Waxaan rabaa bog la cusbooneysiiyo si bilaash ah
Fiiriya ubaxyada aan ogahay inay yihiin kuwa weydiista iyo midka aan ku haysto qafiska si aan u dhigo khariidado, waa inaad iibsataa sida had iyo jeer waxna BILAASH ahayn
Waxaan hayaa GPS-ka 'XROAD', qof ayaa ii sheegi kara halka aan ka soo dejinayo khariidada 'MEXICO', aad ayaan u qaddarin lahaa, salaan dhammaan
malaa'ig azamar ramirez dijo
Galab wanaagsan, waxaan u baahanahay GPS orodyahanka ciyaaraha fudud, ma ii sheegi kartaa halka aan ka soo dejisan karo?
Ku jawaab malag azamar ramirez
Sideen barnaamij ugu fidin karaa tom tom one magaalo ilaa mexico ilaa magaalo ku taal dalka mareykanka mar horeba waxaan haystaa khariidadaha labada dal? Mahadsanid.
Jawaab Edwin Egure
Waad salaaman tahay, waxaan hayaa tom tom 510, waxaan jeclaan lahaa inaan cusbooneysiiyo, maadaama aanan waligey cusbooneysiin, sideen ku sameyn karaa? Ma haysaa cusbooneysiinta? Ma ii sheegi kartaa talaabooyinka la raaco?
Jawaabtaada waan sugayaa.
Ma jiraa qof yaqaan sida loo soo dejiyo khariidadda bilaashka ah ee Mexico ee Tomtom ah inuu tago 720 ??? emailkaygu waa jalvareal@hotmail.com mahadsanid !!!
Qof ma iga caawin karaa Khariidada Mexico oo loogu talagalay GPS X Road
Sideen ku helaa khariidada Venezuela si loogu daro Tom Tom XL 335 SE?
hello waxaan hayaa tom tom one edition cusub iberia waxaanan ubaahanahay khariidadaha oo dhan maxaa yeelay kaadhka xusuusta ayaa iga jabay oo madhan ayuu noqday. Waan ku faraxsanahay caawintaada
Ka jawaab khariidadaha
Sxb waa sidee fadlan i caawi Waxaan haystaa tomtom one gps mana heli karo sida loo soo dejiyo khariidada Venezuela tan iyo halkaan ku noolahay ... fadlan i caawi
Qof ma i siin karaa gacan, waxaan hayaa dhab tom tom 720 oo aan maalmo ka raadinayay internetka si aan u soo dejiyo khariidadaha, ma awoodin inaan helo, fadlan haddii uu jiro qof wax yar ka og mowduucan, Na caawi,
Halkeen ka heli karaa khariidadaha loogu talagalay Sony 93T.
Hagaag, meelna kama heli karo.
Waxaan hayaa airis 509 PDA oo waxaan haystaa TomTom 6 waxaanan doonayay khariidad cusub oo Iberia ah
Waad salaaman tahay, waxaan haystaa GPS Aviton ah waxaanan rabaa inaan arko meesha aan kala soo bixi karo khariidada Mexico iyo tan ugu fiican
Subax wanaagsan, fiiri halka aan ka soo dejisan karo khariidadaha ugu otomaatiga badan ee Venezuela Tomtom one xl
Ku jawaab wilfredo martinez
HELLO ENGO UN TOMTOM ONE XL YURUB.
Aniguna waxaan rabaa inaan cusbooneysiiyo laakiin shabakada rasmiga ah waa mid aad qaali u ah hadii qof garanayo sida loo cusbooneysiiyo khariidadaha gpskan fadlan horeyba waan u haystay
DAISY EE TWARARKA dijo
Saaxiibbaday waad salaaman tihiin, i weydiiya inaan arko haddii uu jiro qaybiyaha TOMTOM oo ku yaal Guadalajara Park, waxaan ka helay mid ka mid ah Maraykanka waana i fashilmay
Jawaab MARGARITA DE LA TORRE
Tower Daisy dijo
Dhibaato ayaan ku qabaa qaabkeyga loo yaqaan 'tomtom mod XXL 550-T', waxaan ka keenay usa si lama filaan ah shaashaddii ayaa isu beddeshay casaan iyo halyeeygii wuxuu u muuqday inaan dhibaato ku qabo khariidada oo halkaasna kama bixi karo, qof ayaa sheegi kara aniga maxaa ku dhacay oo haddii aad wax fikrad ah ka haysato sida loo dayactiro, mahadsanid.
Ku jawaab margarita de la torre
Yaxaas Dominican ah dijo
Dhammaantiin waad salaaman tihiin, waxaan haystaa aaladda 'Tomtom Wireless MkII gps', oo ah, waxay ku xirmi doontaa Bluetoth iyadoo leh Palm Treo 650, dhibaatadu waxay tahay waxaan u baahanahay khariidadaha Dominican Republic si aan u soo dejiyo. eeg haddii qof i caawiyo inaan helo meel aan ka heli karo
Jawaab ku sii Cocodrilodominicano
WAXAAN KU IIBSANAYAA TOMTOM GO 730 GPS VENEZUELA OO AAN U AWOON KARNO IN AAN ISTICMAALO MAADAAMO AAN LAHAYN LACAGTII VENEZUELA WAAD I CAAWIN KARTAA MAHADSANID
Jawaab FRANCISCO PEREZ
Salaan kadib waxaan leeyahay mid tomtom ah mana aqaano sida loo cusbooneysiiyo.Waxaan iri barnaamij ayaa jira
bilaash laakiin iima oggolaan doonto. Waan ku qanacsanahay caawimaaddaada, mahadsanid
Muddo dhowr sano ah waxaan iibsaday tomtom one xl europe tan iyo markaasna ma aanan cusbooneysiin, sidee baan ku heli karaa khariidadaha hadda jira ee gps-kan?
Waxaan ku noolahay Madrid sidaan kuu sheegayna waxaan u baahanahay cusbooneysiinta qaabkan.
Waxaan kaloo rabay inaan ku waydiiyo, ma jirtaa wax macquul ah oo ku saabsan cusbooneysiinta khariidadaha ay gps igu raridoonaan?
Waxaan rajeynayaa caawintaada
Waxay ii keeneen fudayd tomtom ah mana aanan helin waddo aan ku dejiyo khariidadda Venezuela, waxaan aqriyay maqaal horeyba loo heli jiray laakiin kuma muuqato weli bogga rasmiga ah.
SALAAN FARXAD LEH QOF KASTA, ANIGU WAXAAN KU NOOLAHAY ENSENADA BC MEXICO WAANAN IDIXIDHAHAY IN AAD IGU CAAWISO KAGA SOO SAARO Khariidadaha MEXICO, MADAXA AAN HELO GURI KOOBAN KII 3 AAD WAXBARASHADA AANAN HELIN SIDEE AYAAN U SAMEEYAA
Ku jawaab SANTOS SANCHEZ
ceesar anibal nieto G. dijo
Waxaan haystaa tomtom xl mana garanayo sida aan u cusboonaysiin karo khariidadaha dalkayga «Ecuador», dhammaantood maxaa yeelay aaladda lafteeda ma aqoonsana, waxaan rabaa in nidaamka tomtom uu noqdo mid gaar ah oo awood u leh inuu cusboonaysiin karo waxaa ku jira shabakadda.
Aad baan u qadarin doonaa caawimaadda
Ku jawaab cesar anibal nieto G.
Fadlan ma i caawin kartaa maadaama aan heli karo khariidadaha Marooko ama Afrika… .. Aad baad u mahadsan tahay….
Ku jawaab edou
Waad salaaman tahay, waxaan ku iibsaday tomtom via 1505 t ee usa waxaanan rabaa inaan ku soo dejiyo khariidadaha Argentina bilaash, sidee baan u qaban karaa ???
khariidada saxda ah ee argentina ee gps tomtom 310, laga bilaabo ja mahadsanid
Aad ayaan u fiicanahay waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii qof i caawin karo halka laga helo khariidadaha Ecuador ee TOMTOM ONE GPS my. Mahadsanid
Ma garanayo sababta loo sii daayo gt-yadaan tomtom-ka ah haddii ay aad u adag tahay in la helo khariidad barakaysan !! Waxaan ubaahanahay khariidada ecuadorrrrrrr haddii qof ogyahay sida aan iyagana ugu qaddarin lahaa
Waxaan leeyahay tomtom go 730 Waxaan rabaa inaan cusbooneysiiyo khariidadaha dabcan bilaash haddii qof ogyahay meesha aan ka heli karo waan ku qanacsanahay haddii aad ii sheegto
Ku jawaab nica
Waad salaaman tahay ... Cid kastoo i caawisa waxaan leeyahay tomtom aada 710 oo leh khariidad Yurub ah, sidee ayaan u buuxiyaa khariidadda Mareykanka ... aad baad u mahadsan tahay
habeen wanaagsan waxaan haystaa gps tom tom340 xl like ago si aan u soo dejisto khariidadaha venezuela waxaan u baahanahay caawimaad mahaddan
Ku jawaab andres alcala
Waxaan iibsaday TomTom XXL, laakiin ma heli karo khariidadaha Venezuela oo aan ku raro, haddii qof i caawin karo, ugu yaraan magaalooyinka waaweyn waan ku qanacsanahay. Aad baad u mahadsantahay.
Hello wanaagsan! Qof ma i caawin karaa? Dhibaatooyin awgood waxaan ku waayey khariidado ku yaal Tomtom ONE, qof ma iga caawin karaa inaan helo mid hadda jira iyo ansax? qosol badan
Horaan wax uga badalay Sony 93T ilaa Igo 8 waxayna ka timaadaa p ... hooyo, khariidado aad u wanaagsan oo casri ah, radars iyo poi.
Ku jawaab Alvarez
Waxaan jeclaan lahaa inaan kala soo baxo khariidad la cusboonaysiiyay oo loogu talagalay tom tom xxl koonfurta afrika, ma caawin kartaa? Waad ku mahadsantahay horay
Ku jawaab javier lopez iglesias
Mawduucani waa mid duug ah, waa in la tirtiraa maadaama goobta laga soo xigtay ay xirneyd dhowr sano.
Kuwa xiiseynaya waxay leeyihiin ikhtiyaarka gps-khubarada. org
Ku jawaab Appalachian
Waxaan ubaahanahay inaan cusbooneysiiyo khariidadaheyga 7 ″ jpc navigation haddii ay wax sidan oo kale leeyihiin
Ku jawaab guillermo acuña garrido
Waxaan rabaa khariidadaha hada spain tomtom tomtom one 3 edition
Haye, fiiri haddii qof i caawin karo. Waxaan hayaa PC Pocket PC kii iibiyuhuna wuxuu ii rakibay Tomtom qiyaastii 7 sano ka hor, khariidadaha Iberia iyo Canary Islands. Hadda waxaan aadayaa Brazil waxaanan rabaa inaan dhigo khariidadaha dalka laakiin ma heli karo codsi bilaash ah. Fadlan, ma ii sheegi kartaa halka aan ka heli karo?
Ramiro. Waxaan joogaa Kolombiya, maxaan ubaahanahay inaan u beddelo khariidadaha Medellin?
Haye, waxaan ahay Chilean waxaan ubaahanahay khariidada dalkayga.Waxaan hayaa tom tom ONE (30 Series) / 125/130 - 1GB TTS * fadlan ii sheeg hadii uu jiro khariidad Chile ah iyo inkale, mahadsanid
Ku jawaab rodolfo leon diaz
Waa salaaman tahay, ma i caawin kartaa? Waxaan iibsaday TOMTOM waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii aad leedahay qariirad Venezuela
Ku jawaab Yoko
Waad salaaman tihiin. Waxaan hayaa TOMTOM VIA 1500M SE, waxaanan jecelahay inaan u habeeyo si ay iiga shaqayso Dominican Republic, maadaama aan lagu darin noocyada dalal ee ay leedahay. Runtii waan jeclaan lahaa caawimaad kasta oo arintan la xiriirta.
Ku jawaab Rogelio Quezada Sepúlveda
Waxaan hayaa gps dash mw 710 gtv, ma taqaanaa nidaamkee loo cusbooneysiiyaa? Waxay ii sheegeen inay noqon karto Tom Tom laakiin ma doonayo inaan qas sameeyo
mahadsanid caawimaad fadlan
Waad salaaman tihiin, waxaan hayaa tontom oo ma aqbali karo lambarrada boostada ee Boqortooyada Ingiriiska iyo Holland, haddii qof garanayo waxa ay tahay inaan sameeyo fadlan i caawi, MAHADSANID.
Hahaha, hahaha, hahaha, haha ​​qosol baan kala baxayaa !!!!! Waxaad iibsataa gps mana ogid inaad leedahay khariidado wadankaaga ah.
Hahaha. Sideedaba, hambalyo kan kaa iibiyay. Hahaha
Miguel, doqon yahow. Waxaad ka iibsaneysaa GPS-ka dibedda oo noloshaada ayaa ku badbaadinaysa. Markaa waxaad dib ugu laabanaysaa dalkaaga oo aad ogaaneysaa inaadan ku dari karin khariidado kale adigoon lacag kaa qaadan. Taasi waa waxa dadku ogaadaan. Doqon baad tahay oo kuma faraxsana inaad nuugto.
laan waalan dijo
Waxaan ka imid Medellin Colombia Waxaan ubaahanahay inaan cusbooneysiiyo khariidada
Ku jawaab laan waalan
Waad salaaman tahay salaanta wanaagsan..waxaad gaadhay khariidadihii
Jawaab WILMAR VANEGAS M
Waxaan ubaahanahay inaan arko khariidadaha USA wadankuna kama muuqdo xulashooyinka
Venezuela waxaa ku yaal wadooyin waaweeyn ?????????????
Ayaa iga caawin kara inaan cusbooneysiiyo khariidadaha tomtom ee ku yimaada renault rlink. Nooca Khariidaynta 925275 waa la raray. Waad ku mahadsantahay horay.
Sidee cadaabta u sameeyaa albumka TOMTOM ee barakaysan oo ka muuqda kombuyuutarkayga ?????????????????????
WAXA AAN RABO IN AY SII DHACI KARTO IN AAD IGU HAGI KARTO HABKA LOOGU Cusboonaysiinayo TOMTOM XL GPS MAHADSANID
cumar david dijo
hi waxaan haystaa xiddigta tomtom25 laakiin khariidadaha usa uu iyo mid kale oo ka yimid USA, Canada Mexico. laakiin waxaan ka doonayaa Argentina ama South
Jawaab cumar david
Waxaan hayaa TOMTOM XXL oo laga iibsaday oo dibedda laga isticmaalay. Hadda oo aan ku soo noqday si aan u degganaado Argentina, ma heli karo waddo Tom Tom Home ama MyDrive Connect ay ku aqbalaan in aan iibsado khariidadaha Argentina iyo meel kasta oo kale oo adduunka ah (marka laga reebo khariidadaha waddankii aan deggenaa muddo dhawr sano ah) ), tan iyo dhammaadka hawsha iibsiga iyo ka dib gelitaanka macluumaadka kaararka deynta, daaqad had iyo jeer waxay u muuqataa inay dhaheyso QALAD AYAA DHALAY ... iwm iwm Waxaan akoon cusub ka furay TOM TOM Home oo ka imid Argentina oo ma jirto eedadaa, waxba ma iibsan kartid.
Ma igala talin kartaa sida khariidadaha looga iibsado barta internetka?
Jawaab Juan Miguel Cassissa
Waxaan hayaa tom tom one mudo dheer, runtiina waxaan lumiyay kaarka keenay khariidadaha, waa kaarka sd-ka caadiga ah, waxaana rabaa inaan mid kale la dhigo khariidadaha, ma waxaad u maleyneysaa inay jirto dariiq si aad uga rakibto xoqida, waa inaan marwalba eego inaan hagaajiyo laakiin aan u rakibo xoqida.
Waxaan rajeynayaa inaad i caawin karto, mahadsanid.
Ku jawaab maca81
Waxaan hayaa TomTom One oo leh khariidad Mareykan ah waxaanan rabaa inaan dul dhigo khariidada Uruguay, sidee ku sameeyaa?
Waxaan hayaa VIA 1400 tomtom.ma awoodin isticmaalkiisa.Waxaan ka imid Venezuela. Waxaan la yaabanahay miyaanay ku habboonayn khariidadeena?
Ku jawaab ana torres
Waad salaaman tahay maalin kale saaxiib wuxuu i siiyay tomtom 3 jiil oo 512 mb ah wuxuuna i siiyay aniga oo qaabaysan oo ah fat32 waxna kuma rakibo barnaamijkaaga ka hor inta aan la ixtiraamin sida tomtom ay dhahdo oo u rakibo dhamaan wixii cusbooneysiin ah ee aan daarayo oo aan u qaabeeyo Wuxuu ii sheegaa, ma jiraan wax khariidado ah oo la heli karo, maxaan sameeyaa?
Ku jawaab Agonar
Waxaan kucusub ahay soo dejinta iwm.
Waxaan hayaa Tomtom Go 720. Tan iyo markii aan iibsaday, waxaan kaliya isticmaalay khariidadaha ku yimid markii hore, waxaan ka hadlayaa sannado badan.
Dabcan, khariidadaha aanan haysan ma helin waddooyin badan oo hadda jira, jidad, iwm.
Ma awoodi karo xaaladdayda hadda inaan iibsado xirmo kasta oo khariidado cusub ah mana aqaano sida loo bilaabo inaan kala soo baxo xirmo bilaash ah Spain, moodeelkan 'tomtom' oo aan ku rakibo.
Waxaan jeclaan lahaa inaad igu caawiso khariidada Ecuador. Waxaan si deg deg ah ugu baahanahay
Jawaab Flavio Perego
xagee ka soo dejisan karaa khariidada Ecuador ..
hello waxaan rabaa inaan soo dego khariidada oo ii oggolaan maayo inaan sameeyo
Waxaan ubaahanahay inaan soo dejiyo khariidada Panama. Waxay noqon doontaa in tani aysan shaqeyn. Waxaan hayaa Tom Tom 600. Waxaan u baahanahay caawimaad deg deg ah.
Jawaab Luis Chamorro
Waa salaaman tahay manolo, ii oggolaan maysid inaan khariidadaha ka soo dejiyo inkasta oo aan xubin ka noqday golaha, ma jiraan wax ka fudud?
Sideen ugu cusbooneysiin karaa khariidadda Iberia iyo kamaradaha xawaaraha ee 'XL'? In tomtom wuxuu ii sheegayaa inaanan la jaan qaadi karin markii aan dhigayo nambarka taxanaha ah
Hambalyo, waxaan ahay Francisco waxaan jeclaan lahaa inaan ku cusbooneysiiyo Tom Tom ONE Classic khariidada ugu casrisan ee Spain iyo Portugal, hada ma lahan wax qariirad ah sidaa darteed waxaan isku dayay inaan ku cusbooneysiiyo Tom Tom iyo khariidada aan heystay waxay aheyd tirtiray
Jawaab Francisco Bolívar
Waxaan ubaahanahay inaan ku cusbooneysiiyo GPS-ka nidaamka Tom Tom, kaarka SD ee gaarigeyga Fluence 2017 ee aan la imaanin khariidadaha Brazil, sidoo kale Chile waxaanan jeclaan lahaa inaan ku rakibo kaarka, waan sugayaa hadday macquul tahay inay ii soo diraan sida loo sameeyo
Waad salaaman tahay waxaan hayaa tom tom one 2 edition waxaanan jecelahay inaan ku cusboonaysiiyo khariidada iberia 1020, waxay leedahay navcore 9510 iyo bootloder 5.5136, suurta gal ma tahay? waxaad haysaa casharro casriyeysan oo mowduucan ah.
Ku jawaab chesus